China Amanzi Indle Amanzi Indle Amanzi Pump ifektri abakhiqizi | UThongke
Imodeli No: WQ
Ipompo yokuhambisa amanzi evundlile isetshenziselwa ukupompa ukungonakali, izinga lokushisa elingaphansi kuka-60 ° C, okuqinile okumisiwe (kungafaki i-fiber, i-grits) engaphansi kokungu-150 mg / L kokuqukethwe kwendle noma amanzi angcolile. Uhlobo lwe-LPT lokumpompoza lwamanzi mpo luse-LP amaphampu wamanzi amile, futhi ngesisekelo sokwanda nekhola, setha ukuthambisa uwoyela webhubhu ngamanzi. Kungabhema izinga lokushisa elingaphansi kwama-60 ° C, lithumele ukuthi liqukethe okusanhlamvu okuqinile okuthile (okufana nensimbi eyilahliwe nesihlabathi esihle, amalahle, njll.) Kwendle noma amanzi angcolile.
Izindleko zokwakha eziphansi
Ukulawulwa okuhlakaniphile kokusebenza okuphephile
Izindleko zokugijima eziphansi
Imininingwane Inzuzo yesici sephampu ye-WQ Submersible Sewage pump
1. Iningi lezimpelesi ezinempompo yesikhala esingaphansi kuka-400 ziza njengempi yokugijimisa ama-bi-runner kanti ezimbalwa zazo ziyimpepho yama-multi-blade centrifugal. Ngenkathi iningi lezimpelesi ezinempompo yesikhala esingu-400 nangaphezulu ziza njengezigelekeqe ezixubile futhi ezimbalwa zazo ziyimpi yokugijimela abagijimi ababili. Umgijimi obanzi wepayipi wokufaka ipayipi uvumela okuqinile ukuthi kudlule kalula futhi imicu isongwe ngokungaxakile ukuze ilungele kakhulu ukukhipha indle nokungcola.
2. Izimpawu ezimbili ezizimele zokuphela kobuso obufanayo zifakwe ochungechungeni, kufakwa imodi yokufaka njengemodi yokufaka yangaphakathi, futhi, uma kuqhathaniswa nemodi yokufaka yangaphandle, okulingene akukukhulu ukuvuza futhi kubuye kube lula ukubekwa uphawu kokubhangiswa igcotshwe ngamafutha egumbini lamafutha. Isikwele esivundlile esikhethekile noma umthungo omncane usetshenziselwa ukumelana nezinhlamvu eziqinile ezizobekwa kophawu lwemishini yipompo ukuze kuqinisekwe ngomsebenzi waso ozinzile. Imodi ehlukile yokwakheka kwensimbi yemishini nenhlanganisela ethwalayo yenza ingalo yokumiswa shaft ibe mfushane, ukuqina okusindayo nokugxuma okuncane, inzuzo ethe xaxa yokwehlisa ukuvuza okuphuma kunsimbi yomshini nokwelula impilo yako.
3. Imoto yebanga lokuvikela i-IPX8 isebenza ngemodi ecwilisiwe futhi iba nomphumela omuhle kakhulu wokupholisa. Ukwehlukaniswa kwebanga F kwenza ukuthi i-winding ibekezeleleke ezingeni lokushisa eliphakeme futhi, uma kuqhathaniswa nama-motor ajwayelekile, iqina ngokwengeziwe.
4. Inhlanganisela ephelele yekhabethe elikhethekile lokulawula ugesi, inkinobho yoketshezi yebhola entantayo kanye nezinto ezivikelayo zenza ukuqapha okuzenzakalelayo ne-alamu yokuvuza kwamanzi nokushisa okukhulu, ukuvikelwa kwesifunda esifushane, ukulayishwa ngokweqile, ukungabi nesigaba futhi ukunqanyulwa kwamandla kagesi, ukulawula okuzenzakalelayo ngokunembile kwephayiphu, ukuma, ukushintshana kanye nokujula okuphansi kwepompo, ngaphandle kwesidingo sabantu abakhethekile bokubheka, inketho ngokuthanda iyatholakala phakathi kwesiqalo esincishisiwe esincishisiwe kanye nesoft soft qala. Konke lokhu kuqinisekisa ukusetshenziswa okuphephile nokuthembekile kwepompo ngaphandle kokukhathazeka.
5. Zombili izingxenye zemoto nezama-hydraulic zixhunywe ngqo ndawonye, ​​ngaphandle kwesidingo sokuvula ishafti ukuze kugxilwe, kuhlukaniswe kalula futhi kuhlanganiswe ukonga isikhathi, inzuzo yokulungiswa kwesiza, ukunciphisa isikhathi esimisiwe, ukonga izindleko zokulungisa; ukwakheka okulula nokuhlangene kushiya ivolumu encane, kuyadingeka kuphela imishini elula yokuphakamisa, njengoba isibambo esikhethekile sokuphakamisa sisethwe epompini; indawo engaphansi komhlaba kanye nepompo kungabekwa ngqo echibini lendle, ngaphandle kwesidingo sendlu ekhethekile yokumpompa, ngakho-ke ukutshalwa kwezimali kwezokwakha kungagcinwa ngaphezulu kwama-40.
6. Kutholakala nezindlela ezinhlanu zokufaka ongazikhetha: i-auto-coupled, i-hard-pipe ehambayo, ipayipi elithambile elihambayo, uhlobo olumanzi olumile nezindlela zokufaka zohlobo olomile.
Ukufakwa okuhlanganiswe ngokuzenzakalela kusho ukuxhumana phakathi kwepompo nepayipi elikhipha amanzi kwenziwa ngesihlalo samapayipi esidayisa amanzi se-auto-coupling, ngaphandle kokusebenzisa izihlanganisi ezivamile, nokuthi, lapho kufanele uhlukanise ipompo kumbhobho wokukhipha amanzi Isihlalo, vele usibeke phansi kanye nenduku yomhlahlandlela bese uyayiphakamisa, umane nje wenele ukukhululeka ekukhathazekeni nasenkingeni bese ugcine isikhathi.
Ipompo lokuhambisa indle elicwilisiwe ekufakweni kohlobo olomile olungagcini nje ngokufaka esikhundleni sepompo endala yokuma kwendle mpo kodwa futhi ayikwesabi ukucwiliswa kwezikhukhula, ngakho-ke asikho isidingo sendawo ehlukile enikeza ubufakazi bokhukhula, inzuzo yokwehlisa izindleko zokwakha.
Kokubili ukufakwa kwepayipi elukhuni nokufakwa kwamapayipi athambile, kanye nohlobo olulodwa lwamanzi olumisiwe, zonke izindlela ezilula kakhulu zokufakwa.
7. Isistimu yokupholisa izimoto ingasethwa nepompo, engagcini nje ngokupholisa ngokwanele imoto kodwa futhi ibe wusizo ekwehliseni izinga ledamu lendle ukuze ikhiphe indle ekulo ngezinga elikhulu kakhulu.
8. Iphampu isebenza ngemodi ecwilisiwe, ngakho-ke ayikho inkinga yomsindo nenzuzo yokuvikelwa kwemvelo.
Langaphambilini Ukugeleza kwe-MVS Vertical Axial kanye nepompo yendle yokuhambisa indle ehlangene
Olandelayo: Horizontal Split casing centrifugal amanzi olwandle futha
Amandla 10-8000 m3 / h
Ukushisa Kwamanzi kufika ku-60 ºC
Operation ingcindezi kuze kufike ku-18 bar
Izingxenye eziyinhloko zepompo yokukhucululwa kwendle ye-WQ
Pump ikesi & Pump ikhava Insimbi yensimbi, i-Ductile iron, Insimbi engenasici
Impeller Insimbi yensimbi, i-Ductile iron, i-Stainless steel, i-Bronze, i-Duplex SS
Izikebhe zezimoto Insimbi
Shaft 2Cr13, 3Cr13, iDuplex SS
Uphawu Mechanical I-Frictional pair Umsizi / Silicon Carbide
Graphite / Tungsten khabhayithi
I-Silicon Carbide / iTungsten Carbide
I-Tungsten Carbide / iTungsten Carbide
Intwasahlobo Insimbi engagqwali
Ingxenye yerabha I-NBR
Ukwelashwa kwendle ukukhipha indle
Iphrojekthi yokudlulisa amanzi
Amanzi emvula aqukethe okuqinile nemicu emide
I-API610 ANSI Chemical Process Standard Petrochem ...
CZ ovundlile Single Isiteji End ukuncela Centrifu ...
CZ ovundlile centrifugal ekupheleni ukuncela amanzi olwandle ...
ANS (V) Series Double ukuncela Split bezinhlamvu Centr ...
LDP Series Single-Stage Ukuphela-ukuncela ovundlile ...